मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्दै ओली, विना मगर बाहेक यी मन्त्रीको जाने भयो पद! – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्दै ओली, विना मगर बाहेक यी मन्त्रीको जाने भयो पद!
काठमाडौं–सरकार चलायमान रहेको सिम्बोलिक सन्देश दिनेगरी वर्षे अधिवेशनपछि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको तयारी छ । प्रधानमन्त्री झैँ अध्यक्ष प्रचण्ड पनि मन्त्रीमण्डलका एकाध सदस्यलाई तत्काल फिर्ता बोलाउनुपर्ने दबाबमा छन्। ऐन मौकामा आफ्नो आग्रह अवज्ञा गर्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई दाहालले हटाउनुपर्ने इज्जतको सवाल बनेको अवस्था छ । तर,दुबै जना सरकारमा गएदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छाअनुसार चलिरहेकोले उनीहरुको नियति के हुन्छ यकिन छैन ।
पहिलो लटमा मन्त्री बनेका सबैलाई फिर्ता बोलाउने मापदण्डमा टेक्दा बादल, वीना र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा सबैजसो मन्त्रीमण्डलबाट एकैचोटी सफाया हुने सम्भावना छ । त्यसपछि वामदेवलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित रोजेको मन्त्रालय लिने अफर छ ।
पुनर्गठनमा नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउँदा गिरिराजमणि पोखरेल पनि हट्नेछन् । साथै,श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाएपछि सचिवालयमा प्रधानमन्त्री निकट सदस्यहरूको संख्या स्थायी रूपमा पाँच जना बन्ने बुझाई छ । तर,एमसीसी बाहेकका मुद्दामा बादलले पनि आगामी दिनमा प्रधानमन्त्रीलाई नै साथ दिने आँकलन गरिएको छ । वामदेव गौतमलाई बालुवाटारले प्रधानमन्त्रीपछिको वरियतामा रहनेगरी जुनसुकै मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन प्रस्ताव गरेको सन्दर्भ गतसाता नै बाहिर आइसकेको छ । यद्यपि यो काम संबैधानिक हिसाबले सहज नहुने स्थिति आफ्नो ठाउँमा बिध्यमान छदैछ!
उनले ‘जसरी पनि’ पारित गराएर पार्टीभित्र थप विवाद निम्त्याउनु भन्दा पारित नहुनुमा दोषीचाँहि प्रचण्ड र माधव नेपाललाई देखाउनुमा आफ्नो राजनीतिक सफलता देख्न सक्ने पनि अर्थ लगाइएको छ । यस्तो अवस्थामा कालान्तरमा माधव नेपाललाई भन्दा बढी अप्ठेरो प्रचण्डलाई पर्ने भएकाले एमसीसी पारित नभएमा त्यसको दोष उनको टाउकोमा हालिदिने सम्भावना पनि अर्कोतिर देखिन्छ । जनआस्था साप्ताहिक